ချယ်လ်ဆီး မှာ ဆက်နေဖို့က အဓိက ဖြစ်ပေမယ့် ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် သတိပေး ပြောဆို လိုက်တဲ့ #ဂျရူး - SPORTS MYANMAR
ချယ်လ်ဆီး မှာ ဆက်နေဖို့က အဓိက ဖြစ်ပေမယ့် ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် သတိပေး ပြောဆို လိုက်တဲ့ #ဂျရူး
By Edi Tor April 18, 2019
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး အိုလီဗီယာ ဂျရူး ဟာ ယခုနှစ် ဘောလုံး ရာသီ မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နည်းပြ ဆာရီ ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး အနေနဲ့သာ ပါဝင် ပွဲထွက် နေရပြီး အသင်း ရဲ့ ရှုံးထွက် ဖလား ပွဲစဉ် တွေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် တွေမှာသာ အဓိက ကစားသမား အနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့် ရနေခဲ့ ပါတယ် ။
ယနေ့ည မှာလည်း ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ စတမ်းဖို့ဒ် ဘရစ်ခ်ျ ကွင်းကြီး မှာ ယူရိုပါလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ် ဒုတိယအကျော့ ပွဲစဉ် အဖြစ် ဆလားဗီးယား ပရဂ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် တိုက်စစ်မှူး ဂျရူး ဟာ ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိလာဖို့ ရှိနေပါတယ် ။ ဂျရူး ဟာ ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂ် ရဲ့ ဂိုး အများဆုံး သွင်းယူ ထားပေးသူ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း သွင်းဂိုး ၉ဂိုး အထိ ရရှိ ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျရူး ဟာ ဒီရာသီကုန် မှာ ချယ်လ်ဆီး အသင်း နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံး တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ချယ်လ်ဆီး မှ ကမ်းလှမ်း လာမယ့် စာချုပ်သစ် ကို စောင့်မျှော် နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမယ့် လည်း ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်သာ အလိုရှိနေတဲ့ ၄င်း အတွက် ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ နေရာ ရဖို့ မလွယ်ကူ နေတာကြောင့် ဥရောပ မှ ထိပ်သီး ကလပ် တချို့ ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တွေကို လက်ခံ စဉ်းစား ပေးဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
မနေ့က ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ ဂျရူး က သူ့ အနေနဲ့ အနာဂတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချယ်လ်ဆီး အသင်း အပေါ် ဦးစားပေး စဉ်းစား ပေးသွားဖို့ ရှိနေပေမယ့် လည်း ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့် တခု ကိုတော့ အလိုရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အခြား ကလပ် အသင်း တွေဆီက ကမ်းလှမ်းမှု တွေကို ရရှိ ထားခဲ့ပေမယ့် လောလောဆယ် မှာ ချယ်လ်ဆီး နဲ့ အတူ အောင်မြင်မှု ရဖို့ အတွက်ပဲ အာရုံစိုက် ထားကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ဂျရူး က ” ကျွန်တော် ဟာ တကယ်ပဲ ဒီထက် ပွဲတွေ ပိုပြီး ကစားသွားချင် ပါတယ် ။ ဒုတိယ ဦးစားပေး အနေနဲ့ ကစားရတာ ဘယ်လိုမှ မပျော်ရွှင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့ လာမယ့် ဘောလုံး ရာသီ မှာ ပိုပြီး အရေးပါ တဲ့ နေရာ က ပါဝင် ကစားလိုတဲ့ အကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့တာပါ ။ ကျွန်တော့ ကို ကမ်းလှမ်း တဲ့ တခြား ကလပ် တွေ ရှိပါတယ် ။ ဘယ်သူ ၊ ဘယ် အသင်း တွေလဲ ဆိုတာတော့ အကျယ်တဝင့် ပြောမနေတော့ပါဘူး ။ ”
” ကျွန်တော့ ရဲ့ ပထမ ဦးစားပေး က ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဒီမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း တွေနဲ့ အောင်မြင်မှု တွေကြောင့် ကျွန်တော့ ကို ဘာကြောင့် စာချုပ် နောက်ထပ် တနှစ် မကမ်းလှမ်း နိုင်ရမှာလဲ ? ဒါ့အပြင် ကျွန်တော် ဟာ ဒီအသင်း မှာ ဆက်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကစားသွားချင် ပါတယ် ။ ကျွန်တော့ အတွက် အရေးကြီးဆုံး အရာ က ပွဲထွက် ကစား ရတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိနေဖို့ ပါပဲ ။ ”
” နောက်ပြီး လူစားဝင် ကစားခွင့် ရတဲ့ အခါမှာလည်း မိနစ် များများ ပို ကစားရဖို့ လိုပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှု ကို လိုလားတဲ့သူပါ ။ ကျွန်တော် ပြောတာကို ယုံပါ ။ ကျွန်တော် ပွဲထွက်ခွင့် မရတဲ့ အခါ ကစားခွင့် မရတဲ့ အခါ အရမ်း စိတ်ပျက် မိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို စိတ်ပျက် နေတဲ့ ပုံစံ တွေကို ဘယ်သော အခါမှ ကျွန်တော် ဖော်ပြ လေ့ မရှိပါဘူး ။ ”
” ခင်ဗျား ဟာ ပွဲထွက်ခွင့် အတွက် ပြိုင်ဆိုင် ချင်တဲ့ သူ တယောက် ဖြစ်မယ် ဆိုရင် အခက်အခဲ တွေ ကို တနှစ်ပတ်လုံး ရင်ဆိုင် ရနိုင်သလို စိတ်ပျက်ခြင်း တွေကိုလည်း မျိုသိပ် နိုင်ရပါမယ် ။ ပြီးတော့ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေး တွေမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြသ သွားဖို့လည်း လိုပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
ခယျြလျဆီး မှာ ဆကျနဖေို့က အဓိက ဖွဈပမေယျ့ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ သတိပေး ပွောဆို လိုကျတဲ့ #ဂရြူး
ခယျြလျဆီး အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူး အိုလီဗီယာ ဂရြူး ဟာ ယခုနှဈ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး နညျးပွ ဆာရီ ရဲ့ ဒုတိယ ဦးစားပေး တိုကျစဈမှူး အနနေဲ့သာ ပါဝငျ ပှဲထှကျ နရေပွီး အသငျး ရဲ့ ရှုံးထှကျ ဖလား ပှဲစဉျ တှနေဲ့ ယူရိုပါလိဂျ ပှဲစဉျ တှမှောသာ အဓိက ကစားသမား အနနေဲ့ ပါဝငျခှငျ့ ရနခေဲ့ ပါတယျ ။
ယနညေ့ မှာလညျး ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ စတမျးဖို့ဒျ ဘရဈချြ ကှငျးကွီး မှာ ယူရိုပါလိဂျ ကှာတားဖိုငျနယျ ဒုတိယအကြော့ ပှဲစဉျ အဖွဈ ဆလားဗီးယား ပရဂျ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရမှာ ဖွဈတဲ့ အတှကျ တိုကျစဈမှူး ဂရြူး ဟာ ပှဲထှကျခှငျ့ ရရှိလာဖို့ ရှိနပေါတယျ ။ ဂရြူး ဟာ ဒီရာသီ ယူရိုပါလိဂျ ရဲ့ ဂိုး အမြားဆုံး သှငျးယူ ထားပေးသူ ဖွဈပွီး စုစုပေါငျး သှငျးဂိုး ၉ဂိုး အထိ ရရှိ ထားပွီး ဖွဈပါတယျ ။
ဂရြူး ဟာ ဒီရာသီကုနျ မှာ ခယျြလျဆီး အသငျး နဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး ကုနျဆုံး တော့မှာ ဖွဈပမေယျ့ ခယျြလျဆီး မှ ကမျးလှမျး လာမယျ့ စာခြုပျသဈ ကို စောငျ့မြှျော နဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ သို့ပမေယျ့ လညျး ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့သာ အလိုရှိနတေဲ့ ၄ငျး အတှကျ ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ နရော ရဖို့ မလှယျကူ နတောကွောငျ့ ဥရောပ မှ ထိပျသီး ကလပျ တခြို့ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု တှကေို လကျခံ စဉျးစား ပေးဖှယျ ရှိနပေါတယျ ။
မနကေ့ ပှဲကွို သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲ မှာတော့ ဂရြူး က သူ့ အနနေဲ့ အနာဂတျ နဲ့ ပတျသကျပွီး ခယျြလျဆီး အသငျး အပျေါ ဦးစားပေး စဉျးစား ပေးသှားဖို့ ရှိနပေမေယျ့ လညျး ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ တခု ကိုတော့ အလိုရှိနဆေဲ ဖွဈကွောငျး ၊ အခွား ကလပျ အသငျး တှဆေီက ကမျးလှမျးမှု တှကေို ရရှိ ထားခဲ့ပမေယျ့ လောလောဆယျ မှာ ခယျြလျဆီး နဲ့ အတူ အောငျမွငျမှု ရဖို့ အတှကျပဲ အာရုံစိုကျ ထားကွောငျး ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။
ဂရြူး က ” ကြှနျတျော ဟာ တကယျပဲ ဒီထကျ ပှဲတှေ ပိုပွီး ကစားသှားခငျြ ပါတယျ ။ ဒုတိယ ဦးစားပေး အနနေဲ့ ကစားရတာ ဘယျလိုမှ မပြျောရှငျပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့မို့ လာမယျ့ ဘောလုံး ရာသီ မှာ ပိုပွီး အရေးပါ တဲ့ နရော က ပါဝငျ ကစားလိုတဲ့ အကွောငျး ထုတျဖျော ပွောဆို ခဲ့တာပါ ။ ကြှနျတော့ ကို ကမျးလှမျး တဲ့ တခွား ကလပျ တှေ ရှိပါတယျ ။ ဘယျသူ ၊ ဘယျ အသငျး တှလေဲ ဆိုတာတော့ အကယျြတဝငျ့ ပွောမနတေော့ပါဘူး ။ ”
” ကြှနျတော့ ရဲ့ ပထမ ဦးစားပေး က ခယျြလျဆီး အသငျး ဖွဈပါတယျ ။ ကြှနျတျော ဒီမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ မှတျတမျး တှနေဲ့ အောငျမွငျမှု တှကွေောငျ့ ကြှနျတော့ ကို ဘာကွောငျ့ စာခြုပျ နောကျထပျ တနှဈ မကမျးလှမျး နိုငျရမှာလဲ ? ဒါ့အပွငျ ကြှနျတျော ဟာ ဒီအသငျး မှာ ဆကျပွီး ပြျောပြျောရှငျရှငျ ကစားသှားခငျြ ပါတယျ ။ ကြှနျတော့ အတှကျ အရေးကွီးဆုံး အရာ က ပှဲထှကျ ကစား ရတဲ့ အခြိနျမှာ စိတျကနြေပျမှု ရရှိနဖေို့ ပါပဲ ။ ”
” နောကျပွီး လူစားဝငျ ကစားခှငျ့ ရတဲ့ အခါမှာလညျး မိနဈ မြားမြား ပို ကစားရဖို့ လိုပါတယျ ။ ကြှနျတျော ဟာ ပွိုငျဆိုငျမှု ကို လိုလားတဲ့သူပါ ။ ကြှနျတျော ပွောတာကို ယုံပါ ။ ကြှနျတျော ပှဲထှကျခှငျ့ မရတဲ့ အခါ ကစားခှငျ့ မရတဲ့ အခါ အရမျး စိတျပကျြ မိပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို စိတျပကျြ နတေဲ့ ပုံစံ တှကေို ဘယျသော အခါမှ ကြှနျတျော ဖျောပွ လေ့ မရှိပါဘူး ။ ”
” ခငျဗြား ဟာ ပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျ ပွိုငျဆိုငျ ခငျြတဲ့ သူ တယောကျ ဖွဈမယျ ဆိုရငျ အခကျအခဲ တှေ ကို တနှဈပတျလုံး ရငျဆိုငျ ရနိုငျသလို စိတျပကျြခွငျး တှကေိုလညျး မြိုသိပျ နိုငျရပါမယျ ။ ပွီးတော့ ရလာတဲ့ အခှငျ့အရေး တှမှော အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးပွသ သှားဖို့လညျး လိုပါတယျ ။ ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။